အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးပစ္စတင်စက်ရုံထုတ်လုပ်သူစက်ရုံ | 1D;ONE
1d; အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးပစ္စတင်စက်ရုံထုတ်လုပ်သူစက်ရုံ, စက်ရုံ, စက်ရုံ& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော Bosch / Siemens စက်များတပ်ဆင်ထားသည်
1D; ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးပစ္စတင်စက်ရုံထုတ်လုပ်သူများ, Japan NPR နည်းပညာနှင့် 170 တွင်လေ့ကျင့်ထားသောပညာရှင်များ, CCIP အပေါ်ယံတီ, ISO / TSL6949-2002, ISO-2015 အတည်ပြုခဲ့သည်။
1D အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပစ္စတင်စက်ရုံ, စက်ရုံ& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော Bosch / Siemens စက်များတပ်ဆင်ထားသည်
ပစ္စတင်တစ်ခုလုံးကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲနိုင်သည်။ ပစ္စတင်, ပစ္စတင်ခေါင်းနှင့်ပစ္စတင်စကတ်။
ပစ္စတင်၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာဆလင်ဒါ၌လောင်ကျွမ်းခြင်းဖိအားပေးမှုကိုခံပြီးပစ္စတင် pin မှတဆင့် crand ကို crand ကိုထုတ်လွှင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ပစ္စတင်သည်ဆလင်ဒါ ဦး ခေါင်းနှင့်ဆလင်ဒါနံရံနှင့်အတူပိုမိုလောင်ကျွမ်းသောအခန်းကိုဖွဲ့စည်းသည်။
ပစ္စတင်ထိပ်သည်လောင်ကျွမ်းခြင်းအခန်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုမကြာခဏကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်၏ပစ္စတင်၏ပစ္စတင်ထိပ်သည်လောင်ကျွမ်းသောအခန်းကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော, အပူလွန်ကဲမှုသေးငယ်သည့် area ရိယာနှင့်ရိုးရှင်းသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်အပြားသို့မဟုတ် clonave top ကိုလက်ခံသည်။ ခုံးပစ္စတင်ကိုမကြာခဏဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နှစ်ခုတွင်အသုံးပြုသည်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ပစ္စတင်သရဖူကိုများသောအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောတွင်းများသို့မကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
ပစ္စတင်ခေါင်းသည်ပစ္စတင် pin ထိုင်ခုံအထက်တွင်ပါ0င်သည်။ အပူချိန်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်အင်ဂျင်ဆီသို့ chankustion chanking on in channowing and in chankining and ending မှကာကွယ်နိုင်သည့်မြင့်မားသောဖိအားပေးမှုဓာတ်ငွေ့ကိုကာကွယ်ရန်ပစ္စတင်လက်စွပ်ပေါ်တွင်ပစ္စတင်လက်စွပ်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ပစ္စတင်ထိပ်မှစုပ်ယူသောအပူအများစုသည်ပစ္စတင်ထိပ်မှတစ်ဆင့်ဆလင်ဒါသို့ကူးစက်ပျောင်းသောဆလင်ဒါသို့ကူးစက်ပြီးအအေးခံအလတ်စားမှတဆင့်ကူးစက်သည်။
ပစ္စတင်အကြီးအကဲသည်ပစ္စတင်လက်စွပ်ကို install လုပ်ရန်အတွက်လက်စွပ် groove များစွာဖြင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်သည်။ ပစ္စတင်ကွင်းအရေအတွက်သည်အင်ဂျင်မြန်နှုန်းနှင့်ဆလင်ဒါဖိအားနှင့်ဆက်စပ်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မြန်နှုန်းမြင့်အင်ဂျင်၏အရေအတွက်သည်မြန်နှုန်းနိမ့်အင်ဂျင်ထက်နည်းသည်။ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်သည်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထက်နည်းသည်။ အထွေထွေဓာတ်ဆီအင်ဂျင်သည်ဓာတ်ငွေ့ကွင်း2ခုနှင့်ရေနံလက်စွပ် 1 ခုကိုမွေးစားသည်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွင်ဓာတ်ငွေ့ကွင်း3ခုနှင့်ရေနံလက်စွပ် 1 ခုရှိသည်။ မြန်နှုန်းနိမ့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်သည်3~ ဓာတ်ငွေ့ကွင်းများကိုမွေးစားသည်။ ပွတ်တိုက်ခြင်းဆုံးရှုံးမှုကိုလျှော့ချရန်လက်စွပ်ခါးပတ်ကိုတတ်နိုင်သမျှအထိလျှော့ချနိုင်ပြီးတံဆိပ်ခတ်ရန်အခြေအနေအောက်တွင်ကွင်းများအရေအတွက်ကိုလျှော့ချရမည်။
ပစ္စတင်လက်စွပ်လက်စွပ်အောက်ရှိအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည်ပစ္စတင်လက်စွပ်များဟုခေါ်သည်။ ၎င်း၏ function သည်ပစ္စတင်အားဆလင်ဒါရှိအပြန်အလှန်ရွေ့လျားမှုဖြင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုလမ်းညွှန်ရန်ဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်အလုပ်လုပ်သောအခါပစ္စတင်သည်ဆလင်ဒါတွင်ဓာတ်ငွေ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ပစ္စတင်နှင့်ပုံပျက်လိမ့်မည်။ ပစ္စတင်ပြီးနောက်ပစ္စတင် PIN တွင်သတ္တုအမြောက်အများကြောင့်ကျယ်ပြန့်သောကြောင့်၎င်း၏တိုးချဲ့မှုသည်အခြားနေရာများတွင်ထက်ကြီးသည်။ ထို့အပြင်ပစ္စတင်သည်ဘေးဒဏ်သင့်ဖိအားများ၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်ထုတ်လွှတ်မှုပုံပျက်သောထုတ်လုပ်မှုများကိုလည်းထုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ အထက်ပါပုံပျက်သောကြောင့်ပစ္စတင်စကတ်သည်ပစ္စတင်စကတ်၏အပိုင်းအစသည်ပစ္စတင် pin ၏လမ်းညွှန်မှုတွင်ရှည်လျားသောဝင်ရိုးတန်းများဖြစ်လာသည်။ ထို့အပြင်ပစ္စတင်၏ဝင်ရိုးတစ်လျှောက်အပူချိန်နှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မဖြန့်ဖြူးဖြန့်ဖြူးခြင်းကြောင့်, အပိုင်းတစ်ခုစီ၏အပူတိုးချဲ့မှုသည်အောက်ခြေတွင်ထိပ်တန်းနှင့်သေးငယ်သည်
2. ပစ္စတင်ကိုထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများအရ၎င်းကို Cast Iron ပစ္စတင်, သံမဏိပစ္စမွန်, အလူမီနီယမ်အလွိုင်းပစ္စတင်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောပစ္စတင်များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
3. Piston ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အရ၎င်းကိုဆွဲငင်အားဖြင့်၎င်းအားမြေထုဆွဲထားသည့်ပစ္စတင်သို့ ခွဲ. ပစ္စတင်သွန်းခြင်းနှင့်ပစ္စတင်ကိုအတုပြုလုပ်သည်။
4. ပစ္စတင်၏အလုပ်လုပ်သောအခြေအနေအရ၎င်းကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ ဖိအားပေးသောပစ္စတင်နှင့်ဖိအားပေးမှုပစ္စတင်
5. ပစ္စတင်၏ရည်ရွယ်ချက်အရ၎င်းကိုကားပစ္စတင်, မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပစ္စတင်, Tane Pismon, Tank Circmer ပစ္စငွေ, စင်္ကြံပစ္စငွေ,
ငါတို့ 1D Auto အစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ 2012 နှစ်များတွင်စတင်ခဲ့ပြီးအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်သောအဓိကထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းချက်အကွာအဝေးတွင်အကောင်းဆုံး Grade Gasket ပါဝင်သည်။ ကမ်းလှမ်းချက်အားလုံးကိုအရည်အသွေးစံနှုန်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းချက်များထုတ်ကုန်များသည်အသုံးပြုရန်, စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း, ဤအပြင်အနေဖြင့်ဤအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်ရယူနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်စက်ယန္တရားနှင့်ခေတ်မီသောနည်းပညာများတပ်ဆင်ထားသည့်ကြိုတင် အခြေခံ. အခြေခံအဆောက်အအုံယူနစ်တစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်ရန်ကမ်းလှမ်းထားသောထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းရှိနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံအဆောက်အအုံများကိုအဆင့်မြှင့်တင်နေပါသည်။